नेपालकै अनौठो शक्तिसाली देवीको मन्दिर ,सबैको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ जुन ठाउँ धेरै दु्घर्घटना हुने गर्दछ (सबैले सेयर गरौ) – Khabar PatrikaNp
नेपालकै अनौठो शक्तिसाली देवीको मन्दिर ,सबैको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ जुन ठाउँ धेरै दु्घर्घटना हुने गर्दछ (सबैले सेयर गरौ)
August 10, 2020 326
नेपालकै अनौठो शक्तिसाली देवीको मन्दिर जहाँ ऐनै ऐना ले भरी भरीभराउ छ ॐ लेखी भेटी स्वरु (सबैले सेयर गरौ)
पूर्वी पहाड र मध्य तराईबाट राजधानी भित्रिने सबैभन्दा छोटो दूरी मा रहेको छ बिपी राजमार्ग । जहाँ दैनिक साना ठुला गरि हजारौं सवारी साधन चल्ने गदर्छ, जुन मार्गलाई जापान सरकार को सहयोग मा निर्माण गरेको हो।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरको तल अक्कर भीर र सुनकोशी नदी रहेको छ । काठमाडौंबाट बनेपा–धुलिखेल–भकुण्डेबेसी– नेपालथोक हुँदै खुर्कोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिट्ठे भीर । जुन ठाउँको सडकमा हजारभन्दा बदी ऐनाहरु टाँसेको देख्न सकिन्छ । यो दृश्य देख्ना साथ सबैको मनमा एक किसिमको कौतुहलता पैदा हुनु स्वभाविकै हो।
सडकको भित्ताभरी ऐना टास्नुको पछाडि धेरै कुराहरु लुकेको छ । जब कोही यात्रु होस् अथवा सवारी चालक त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै सबैको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुन्छ । जुन ठाउँ धेरै दु्घर्घटना हुने गर्दछ । केही तथ्यलाई हेर्दा विसं २०५८ वैशाख २० गते सिन्धुलीबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरमा बस खस्दा १४ जनाको निधन भएको थियो । २०६८ असोज २६ गते त्यसै ठाउँमा बस खस्दा बसका सबै यात्रु ४२ जनाको निधन भएको थियो ।
त्यसको ठिक छ वर्षपछि २०७६ असोज २६ गते ६ जनाको निधन भएको थियो । जुन ठाउँमा धेरै यात्रुहरुले ज्या न गुमाएका छन् । हजारौं ऐनाहरु भित्र लुकेका अनेकै रहस्यहरु आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि त्यस ठाउँमा सानो र साघुरो गोरेटो बाटो थियो । बाटो नजिकै एउटा ठुलो सालको रुख थियो । रुखमुनि सानो पोखरी थियो । जुन पोखरीबाट पानी आउथ्यो । मानिसलाई पानी लैजान सजिलो हुन्थ्याे। तर जापान सरकारले सडक बनाउने क्रममा पानी र पोखरी दुवै मासिदियो ।
पोखरीमा देबि छ र देवीको तेति ठूलो सक्ति छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भएन, जहाँ पूजा आरधना चाहिँ पहिला देखि नै गरिन्थ्यो। त्यसको केही समयपछि एउटा आठ वर्षीया बालिकामा देवी उत्पन्न भइन् र उनले म देवी माता हुँ मलाई तिमीहरुले बस्न दिएनौ, मेरो बस्ने ठाउँ नै भत्कायौ, मेरो टाउको माथि गाडीहरु गुडिरहेको छ । मेरो लागि कसैले पनि मन्दिर बनाइदिएन् । जबसम्म मेरो नाममा मन्दिर बन्दैन तबसम्म म धेरै मान्छेहरुको भोग खान्छु भनिन् । स्थानीयहरुले त्यस कुरामा गम्भीर भएनन् ।
त्यसको केही समयपछि यात्रुवाहक वस शुनकोशी नदीमा खस्दा ४२ जनाको निधन भएको थियो, जसको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर सप्ताह पनि लगाइदिए स्थानीयहरुले । सप्ताह लागेको बेला एक्कासी एउटी महिलामा देवी उत्पन्न भएर उनले बोकेको भरमा कोशीमा गएर सेतो ढुङ्गा लिएर एउटा रुखको जराको सेतो र रातो कपडाको धोजा बनाएपछि मन्दिर बनाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । देवी मातालाई मन पर्ने भनेर ऐनाहरु राखियो । बिस्तारै ऐनाले धेरै संख्या लिन पुग्यो ।
ऐनाको दृश्यमा भुतप्रेत आउने नसक्ने र मानिसलाई दुःख दिन नसक्ने भएकाले यस स्थानमा ऐना राख्ने गरिएको जनविश्वास रहेको छ । आजभोलि त्यस स्थानमा जाने जोकोहीले पनि ऐना टाँस्ने गर्दछन् । यात्रु होस् या सर्वसाधरण त्यस ठाउँमा पुगेपछि केही समय रोकिएर ढोग्ने गर्दछन् । अझै पनि त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै मानिसहरुको मनमा एक किसिमको डर पैदा हुने गर्दछ ।
Prevविनय तारा फाउण्डेशन अस्पतालका सुरक्षागार्डको कोरोनाबाट मृत्यु
Nextयसो गर्नुहोस् कहिले असफल हुनु पर्दैन,गरेको काम बिग्रने र असफल हुने भएको छ ?
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६० लाख नाघ्यो, एकैदिन थपिए ८२ हजार बिरामी
ओलीपक्षीयहरुको गोप्य बैठकको कुराकानी लिक: भयो, खुमलटारमा भूईचालो, अब के गर्लान प्रचण्ड ?
जिम्मेवारीबाट बिदा भएका घिसिङका सवालमा भने सिंगो मुलुक उनको पक्षमा,पदले होइन कामले रच्छ इतिहास
मुटु हल्लाउने प्रमाण बिजय शाही माथी चर्को आलोचना,ह-मला भएपछि फेरि देखाए नपत्याउनेले (हेर्नुहोस भिडियो)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (30968)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30099)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28216)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25530)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (23242)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (21414)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15856)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15266)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (13964)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13519)
टिकटककाे लागी स्वरुपनै फेरीन निरुपाले हेर्नुहोस (पुराभिडियो)
टिकटकमा भाइरल बन्दै रमेश–कल्पनाको जोडी…